A106grb isina musono simbi pombi mugadziri wemasheya
Iyo kambani Shandong Weichuan Metal Prodducts Co., Ltd.
High pressure boiler chubhu
Pombi yesimbi yakakora
Fluid simbi pombi
Simbi chimiro simbi pombi
Petroleum inoputika chubhu
Anti-corrosion simbi pombi
Galvanized square pombi ndeyemhando yepamusoro uye yakaderera mutengo
China 27SiMn hydraulic simbi pombi mugadziri
Chinese high tembiricha penstock mugadziri
Polyethylene mvura pombi mugadziri kutengesa
Chinese 3PE anticorrosive simbi pombi mugadziri
Hunhu uye uwandu Stainless simbi welded pombi
Simbi pombi ine gomo chikamu uye kureba kwayo yakakura kudarika dhayamita kana denderedzwa resimbi. Zvinoenderana nechimiro chechikamu, chakakamurwa kuita denderedzwa, sikweya, rectangular uye yakakosha-yakaumbwa simbi pombi; Zvinoenderana nenyaya yacho, yakakamurwa kuita kabhoni yesimbi yesimbi pombi, yakaderera alloy structural simbi pombi, alloy simbi pombi uye composite simbi pombi.
Simbi pombi ine gomo chikamu uye kureba kwayo yakakura kudarika dhayamita kana denderedzwa resimbi. Zvinoenderana nechimiro chechikamu, chakakamurwa kuita denderedzwa, sikweya, rectangular uye yakakosha-yakaumbwa simbi pombi; Zvinoenderana nenyaya yacho, yakakamurwa kuita kabhoni yesimbi pombi, yakaderera alloy structural simbi pombi, alloy simbi pombi uye composite simbi pombi; Yakakamurwa kuita mapaipi esimbi ekutepfenyura pombi, chimiro cheinjiniya, midziyo yekupisa, petrochemical indasitiri, kugadzira michina, geological drilling, high-pressure midziyo, nezvimwe; Zvinoenderana nemaitiro ekugadzira, yakakamurwa kuita seamless simbi pombi uye welded simbi pombi. Seamless simbi pombi inokamurwa inopisa kukungurutswa uye kutonhora kukungurutsa (kudhirowa), uye welded simbi pombi inokamurwa yakatwasuka musono welded simbi pombi uye spiral musono welded simbi pombi.
Simbi pombi haingoshandiswe chete kufambisa mvura neupfu, kuchinjanisa kupisa kwesimba, kugadzira michina yezvikamu nemidziyo, asiwo simbi yehupfumi. Kushandisa pombi yesimbi kugadzira gidhi rekuvaka, mbiru uye mekiniki tsigiro inogona kuderedza huremu, chengetedza simbi ne20 ~ 40%, uye kuona maindasitiri uye mechanized kuvaka. Kugadzira Highway Bridges nemapombi esimbi haingogone chete kuchengetedza simbi uye kurerutsa kuvaka, asi zvakare kuderedza zvakanyanya nzvimbo yekudzivirira yekuvhara uye kuchengetedza mari yekudyara nekugadzirisa.
Mapaipi esimbi anogona kupatsanurwa muzvikamu zviviri zvichienderana nekugadzira nzira: isina musono simbi pombi uye welded simbi pombi. Mapaipi esimbi akasungwa anonzi mapombi akakandwa kwenguva pfupi.
1. Seamless simbi pombi inogona kukamurwa kuita inopisa yakakungurutswa isina musono pombi, inotonhora inodhonzwa pombi, chaiyo simbi pombi, inopisa yakawedzera pombi, inotonhora inotenderera pombi uye extruded pombi zvinoenderana nekugadzira nzira.
Masumbu emapombi esimbi
Seamless simbi pombi inogadzirwa nemhando yepamusoro kabhoni simbi kana alloy simbi, iyo inogona kupatsanurwa kuita inopisa kukunguruka uye kutonhora kukunguruka (kudhirowa).
2.Welded simbi pombi yakakamurwa muchoto welded pombi, yemagetsi welding (resistance welding) pombi uye otomatiki arc welded pombi nekuda kweakasiyana maitirwo. Nekuda kwemhando dzakasiyana-siyana dzekushongedza, yakakamurwa kuita yakatwasuka musono welded pombi uye spiral welded pombi. Nekuda kwechimiro chayo chekupedzisira, chakakamurwa kuita denderedzwa welded pombi uye yakakosha-yakaumbwa (square, flat, etc.) welded pombi.
Welded simbi pombi inogadzirwa nesimbi yakakungurutswa ndiro yakasungwa nebutt joint kana spiral seam. Panyaya yekugadzira nzira, yakakamurwa kuita welded simbi pombi yepasi-kumanikidza fluid kutapurirana, spiral seam welded simbi pombi, yakananga yakakungurutswa welded simbi pombi, welded simbi pombi, etc. Seamless simbi pombi inogona kushandiswa mvura uye gasi mapaipi. mumaindasitiri akasiyana. Welded pombi anogona kushandiswa mvura pombi, gasi mapaipi, kudziyisa mapaipi, magetsi pombi, etc.
Simbi pombi inogona kukamurwa kuva kabhoni nyere, alloy pombi, Stainless simbi pombi, etc. maererano pombi zvinhu (kureva simbi giredhi).
Carbon pombi inogona kukamurwa kuita yakajairwa kabhoni simbi pombi uye yepamusoro-mhando kabhoni yemaitiro pombi.
Alloy pombi inogona kukamurwa kuita: yakaderera alloy pombi, alloy chimiro pombi, yakakwira alloy pombi uye yakakwirira simba pombi. Kutakura pombi, kupisa uye asidi inodzivirira pombi isina tsvina, chaiyo alloy (senge kovar alloy) pombi uye superalloy pombi, nezvimwe.
Welded simbi pombi, inozivikanwawo sewelded pombi, ipombi yesimbi yakasungwa nendiro yesimbi kana simbi tambo mushure mekupwanya. Welded simbi pombi ine zvakanakira nyore kugadzirwa muitiro, yakakwirira kugadzirwa kunyatsoshanda, akawanda siyana uye nokurondedzerwa uye shoma midziyo mari, asi simba rayo rose rakaderera pane musono simbi pombi. Kubva kuma1930s, nekukurumidza kusimudzira kwemhando yepamusoro tambo inoenderera kugadzirwa uye kufambira mberi kwewelding uye yekuongorora tekinoroji, mhando yeweld yakaramba ichivandudzwa, mhando uye zvirevo zvepombi dzesimbi dzakashongedzerwa dzave kuwedzera, uye mapaipi esimbi asina musono akave. yakatsiviwa mundima dzakawanda. Welded simbi mapaipi akakamurwa yakatwasuka welded pombi uye spiral welded pombi maererano chimiro weld.
Longitudinal welded pombi ine zvakanakira nyore kugadzirwa muitiro, yakakwirira kugadzirwa kunyatsoshanda, yakaderera mutengo uye kukurumidza kukura. Simba re spiral welded pombi rinowanzo kwirira pane iro reyakatwasuka welded pombi. Inogona kubudisa welded mutopota ane hombe pombi dhayamita ane nhete isina, uye welded pombi ine dhayamita siyana pombi isina chinhu upamhi zvakafanana. Zvisinei, kana tichienzanisa nepombi yakatwasuka seam ine hurefu hwakafanana, kureba kweweld kunowedzera ne30 ~ 100%, uye kukurumidza kwekugadzira kwakaderera. Naizvozvo, musono seam welding inonyanya kushandiswa kune diki-diameter welded pombi, uye spiral welding inonyanya kushandiswa kune hombe-diameter welded pombi.
Welded simbi pombi yeyakaderera kumanikidza fluid kutapurirana (GB / t3091-2008) inozivikanwawo seyakajairwa welded pombi, inowanzozivikanwa sepombi nhema. Iyo pombi yesimbi yakashongedzwa inoshandiswa kutakura mvura, gasi, mhepo, oiri, kupisa chiutsi uye zvimwewo zvakajairika zvinodzikira mvura uye zvimwe zvinangwa. Ukobvu hwemadziro esimbi pombi yekubatanidza yakakamurwa kuita yakajairika simbi pombi uye gobvu simbi pombi; Iyo muromo inopera yakakamurwa kuita isina threaded simbi pombi (yakapfava pombi) uye tambo yesimbi pombi. Iyo welded simbi pombi yepasi-pressure fluid transmission haingoshandiswe zvakananga kutapurirana kwemvura, asi zvakare inoshandiswa zvakanyanya sepombi yepakutanga yepombi yakashongedzwa yesimbi yepasi-kudzvanywa kwemvura.
1.Galvanized welded simbi pombi yepasi-kudzvanywa fluid kutapurirana (GB / t3091-2008) inozivikanwawo se galvanized welded simbi pombi, inowanzonzi chena pombi. Iyo inopisa-dip galvanized welded (furnace welding kana electric welding) pombi yesimbi inoshandiswa kufambisa mvura, gasi, oiri yemhepo, kupisa chiutsi, kudziyisa mvura uye zvimwewo zvakazara low low pressure fluid kana zvimwe zvinangwa. Ukobvu hwemadziro esimbi pombi yekubatanidza yakakamurwa kuita yakajairika galvanized simbi pombi uye yakakobvu yesimbi pombi; Iyo muromo inopera yakakamurwa kuita isina shinda yakakwenenzverwa simbi pombi uye yakadhindwa galvanized simbi pombi. Tsanangudzo yepombi yesimbi inoratidzwa mune zita rekuti dhayamita (mm), inova iyo inofananidzira kukosha kwedhayamita yemukati. Itsika kushandisa masendimita, senge 1/2, 3/4, 1, 2, nezvimwe.
2. zvakajairwa kabhoni simbi wire wire sleeve (Yb / t5305-2006) ipombi yesimbi inoshandiswa kuchengetedza waya mumapurojekiti ekuisa magetsi akadai sezvivakwa zvemaindasitiri uye zvevagari nekuiswa kwemichina nemidziyo.
3.Straight musono electric welded steel pombi (GB / t13793-2008) ipombi yesimbi ine weld inofananidzwa kureba nepombi yesimbi. Kune yakajairika chimiro, inowanzo patsanurwa kuita metric welded simbi pombi, welded nhete-madziro pombi, nezvimwe.
4.Spiral seam yakanyura arc welded simbi pombi (SY / t5037-2000) yekumanikidza fluid transmission is spiral seam simbi pombi inoshandiswa kumanikidza fluid transmission, iyo inotora inopisa-yakakungurutswa simbi tambo coil sepombi isina chinhu, kazhinji inodziya inotenderera ichiita uye yakapetwa kaviri. yakanyura arc welding. Iyo pombi yesimbi ine simba rakasimba rinotakura simba uye yakanaka welding performance. Mushure mekuongorora kwakasiyana-siyana kwesainzi uye bvunzo, yakachengeteka uye yakavimbika kushandisa. Iyo pombi yesimbi ine dhayamita yakakura uye yakakwirira kutapurirana kunyatsoshanda, uye inogona kuchengetedza mari mukuisa mapaipi. Iyo pombi inonyanya kushandiswa kutakura mafuta uye gasi rechisikigo.
5.Spiral seam yakakwira-frequency welded simbi pombi (SY / t5038-2000) yekumanikidza kufambisa kwemvura ndeye spiral seam yakakwira-frequency welded simbi pombi yekumanikidza kwekufambisa kwemvura, iyo inotora inopisa-yakakungurutswa simbi coil sepombi isina chinhu, kazhinji inodziya inotenderera ichigadzira. uye yakakwirira-frequency lap welding nzira. Iyo pombi yesimbi ine simba rakasimba rinotakura simba uye plastiki yakanaka, iyo yakanakira welding uye kugadzirisa; Mushure mekuongorora kwakasiyana-siyana kwakasimba uye kwesainzi uye bvunzo, iyo utility modhi ine zvakanakira kushandiswa kwakachengeteka uye kwakavimbika, yakakura dhayamita yepombi dzesimbi, yakanyanya kutapurirana zvakanaka, uye kuchengetedza mari mukuisa mapaipi. Inonyanya kushandiswa kuisa mapaipi ekutakura oiri, gasi rechisikigo, nezvimwe.
6. Spiral seam yakakwira-frequency welded simbi pombi yezvizhinji yakaderera-pressure fluid yekufambisa (SY / t5039-2000) inotora inopisa-yakakungurutswa simbi tambo coil sepombi isina chinhu, kazhinji inodziya inotenderera kuumbwa, uye inoshandisa yakakwira-frequency lap welding nzira yekushongedza spiral seam. high-frequency welded simbi pombi yezvizhinji zvakaderera-kudzvanywa kwemvura yekufambisa.
7.Spiral welded simbi pombi yemurwi (SY / t5768-2000) inogadzirwa neinopisa-yakatenderedzwa simbi coil sepombi isina chinhu, kazhinji inodziya inotenderera ichiumbwa, uye yakagadzirwa nekaviri-mativi akanyudzwa arc welding kana yakakwirira-frequency welding. Inoshandiswa kune simbi pombi yenheyo murwi wechivako chekuvaka, wharf, bhiriji uye zvichingodaro.
Zvakapfuura: Yakagadzirirwa square machubhu emhando dzakasiyana siyana
Zvinotevera: 45 # simbi pombi ndeyemhando yepamusoro uye yakaderera mutengo
Boiler Seamless Simbi Pipe
Marasha Anopisa Boiler Simbi Pipe
Industrial Boiler Simbi Pipe
Seamless Simbi Pipe YeBoiler
Steam Boiler Simbi Pipe
High pressure simbi pombi inogadzira w...
Warranty yechokwadi boiler chubhu inogadzira
A106gr.B isina musono simbi pombi mugadziri direc...
S355j2h isina musono simbi pombi mugadziri warran...
High pressure resistant boiler tube kugadzira...
Kuitira kuzadzisa zvinodiwa nevatengi, kambani ikozvino inogona kutengesa isina musono simbi pombi zvigadzirwa seTiangang, Baotou Steel, Baosteel, Hengyang, Jiangyin, Xinchangjiang uye metallurgical simbi.
25,08,21Chikumi 16, 2017
Seamless simbi pombi